မြန်မာစကား ပြောတတ်သေးရဲ့လား? – The Blog of Aung
တကယ်တန်း မိမိမှာ မြန်မာစကား မပြောတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်မှာ နေထိုင်ပြီး နေ့စဥ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကို ရေးသား ပြောဆို ဖတ်ရှု နားထောင် နေရသော်လည်း၊ အခုလို အင်တာနက်ပေါ်မှ တဆင့် မြန်မာစာများ ရေးသားသလို၊ မြန်မာစာများကိုလဲ နေ့စဥ် ဖတ်ရှုသည့် အပြင်၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်က မြန်မာ အသိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လဲ မြန်မာလို ပြောဆိုနေကြ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိ နားလည်သလောက် ဆိုရရင် – မြန်မာစကားဟာ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝပြီး၊ စကားလုံး အသုံးအနှုန်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ပြောဆိုနိုင်တဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ပြီး ဥပမာ ပြရရင် – အင်္ဂလိပ် စကားမှာ I, You ဆိုတဲ့ နာမ်စားကို နေရာတိုင်းမှာ အသုံးပြုပေမဲ့ မြန်မာ စကားမှာ ဆိုရင် “ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ၊ ကိုယ်၊ ကျွန်ုပ်၊ မိမိ၊ အမောင်၊ အမ၊ နင်၊ ငါ” စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးကို အခြေအနေ အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာ ပြောင်းလဲ သုံးစွဲ ပြောဆို ကြပါတယ်။
ဒီလိုဘဲ မြန်မာစကားမှာ ကြိယာ အသုံးအနှုန်း၊ ဝိသေသန အသုံးအနှုန်း များအပြင် သဒ္ဒါပိုင်းများမှာပါ သင့်တင့်လျောက်ပတ် သလို အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ သုံးစွဲလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ မြန်မာစကားဟာ အဓိပ္ပါယ် ထိထိရောက်ရောက် ပြဆိုလို့ ရသလို နားဝင်ချိုအောင်လဲ လှလှပပ သုံးစွဲလို့ ရတဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
တဖက်မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားဟာ ဒီနေ့ ကမ္ဘာသုံး စကား ဖြစ်တဲ့ အလျှောက် အခြားဘာသာ စကားပြောသူတွေ အတွက် သူတို့ရဲ့ မိခင်ဘာသာ စကားကနေ ပြန်ဆို သုံးစွဲဖို့မှာ အသုံးပြုကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ မြန်မာနဲ့ ထိုင်း၊ ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယား၊ အန္ဒိယနဲ့ တရုတ်၊ အဲသည်လို ဘာသာစကား မတူသူ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရာမှာ နှစ်ဖက် နားလည်နိုင်မဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုကို ကြားခံထားပြီး အသုံးပြုတဲ့ အနေနဲ့ မိမိရဲ့ မိခင် ဘာသာစကား ကနေ အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက် ပြန်ဆို ပြောဆိုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် မြန်မာ – မြန်မာ အချင်းချင်း၊ ဂျပန် – ဂျပန် အချင်းချင်း၊ ထိုင်း – ထိုင်း အချင်းချင်း ဘာသာစကား အတူတူချင်းမှာတော့ ဘာအတွက် အင်္ဂလိပ်စကားကို ကြားခံပြီး ထည့်သုံးဖို့ လိုသလဲ ဆိုတာကိုတော့ မစဥ်းစားတတ်ပါဖူး။ မိမိရဲ့ မိခင်ဘာသာ စကားမှာ သုံးစရာ ဝေါဟာရ မရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ အင်္ဂလိပ်လို ထည့်သုံး ညှပ်သုံးတာ ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဥပမာ – အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရကနေ မြန်မာ ဝေါဟာရကို တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုရတာမျိုး ဖြစ်တဲ့ ‘ကွန်ပျူတာ’၊ ‘မော်တော်ကား’၊ ‘ဖေ့စ်ဘွတ်’ ဒီလိုမျိုးတွေကို သုံးရတာကတော့ ထားပါတော့။
ဒါပေမဲ့ ‘အံ့အားသင့်အောင်လုပ်တာ’ ဆိုတဲ့ မြန်မာစကား ရှိပြီးသား ကို အင်္ဂလိပ်လို ညှပ်ပြီး ‘စပရိုက် လုပ်တာ’ ဆိုရင်တော့ အလွန်မှ ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြင် ရှက်စရာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
ရယ်စရာ ကောင်းတယ် ဆိုတာက – တစ်ခါ မြန်မာ သတင်းတစ်ခုမှာ ရေးထားတာကို ဖတ်မိလိုက် ရတာပါ။ ‘စပရိုက် လုပ်တာ’ လို့ ရေးထားတာကို ဖတ်မိတော့ အဲဒီ နေရာမှာ ရပ်ပြီး လန့်သွားပါတယ်။ ‘စ – ပ – ရိုက်’ တယ် ဆိုတော့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲဆိုတဲ့ စကားတွေကို သတင်းဌာနတွေကတောင် သုံးစွဲ နေသလား ဆိုပြီး ထင်လိုက်မိတာပါ။ နောက်မှ အင်္ဂလိပ်စကား surprise ကို သုံးထားတယ် ဆိုတာ သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပါပြီ၊ ကိုယ့်ဘာသာ စကားကို အထင်သေးလို့ သူများ ဘာသာစကားကို အထင်ကြီး သုံးချင်တယ် ဆိုရင်လဲ သူ့စကားကို သူ့အသံမှန် ထွက်အောင် ပြန်တတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ surprise ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို က ‘စပရိုက်’ လို့ အသံမထွက်ပါဖူး၊ အနီးစပ်ဆုံး မြန်မာစာနဲ့ အသံထွက်ရေးပြရရင် – ‘ဆာဖရိုက်စ်’ လို့ အသံထွက်ပါတယ်။
တစ်ခါ မြန်မာစကားမှာ ဆိုရင်လဲ – ‘အံ့အားသင့်လုပ်တာ’ လို့ ပြောမရပါဖူး၊ ‘အံ့အားသင့်အောင် လုပ်တာ’ လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြားမှာ ‘အောင်’ ဆိုတဲ့ စာလုံး တစ်လုံး ပျောက်သွားတာနဲ့ အဓိပ္ပါယ် လွဲချော်သွားနိုင်သလို အင်္ဂလိပ်စကားမှာ လဲ ဒီလိုပါဘဲ။ တစ်စုံတစ်ဦးကို အံ့အားသင့်အောင် လုပ်တယ် ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်လို – To make someone feel surprised လို့ပြောပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုမှာ surprise (ဆာဖရိုက်စ်) လို့ ဆိုတာနဲ့ surprised (ဆာဖရိုက်စထ်) လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့မှာ အံ့အားသင့်တာနဲ့ အံ့အားသင့်အောင် ဆိုတာကွာသလိုပါဘဲ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားကို သေသေချာချာ ကျွမ်းကျင်မှ အင်္ဂလိပ်လို ပြောပါလို့ မဆိုလိုပါဖူး၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ဘာသာစကား ကွဲပြားတဲ့ အခါမှာ ဆက်သွယ်မှုရအောင် ကိုယ့် မိခင်ဘာသာ စကားမဟုတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို အဌားယူ ပြောဆိုသုံးစွဲရတဲ့ အခါမှာတော့ အသံထွက်လဲ မှန်ချင်မှ မှန်မယ်၊ အသုံးအနှုန်းလဲ မှန်ချင်မှ မှန်မှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဘာသာစကားလဲ မကွဲပြားတဲ့ မြန်မာ အချင်းချင်း ကြားမှာ မြန်မာစကား ဝေါဟာရလဲ ရှိပါရဲ့သားနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ထည့်သုံးညှပ်သုံး ပြမှ လူအထင်ကြီးမယ် ထင်သူတွေ အတွက်မှာ သူတို့ သုံးတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားဟာ ပီပီသသ မှန်မှန်ကန်ကန် မဟုတ်တဲ့ အတွက် ရယ်စရာဖြစ်နေတာကို ရှက်တတ်မယ် ဆိုရင်တော့ကောင်းပါရဲ့။
အခုတော့ တွေ့ရတာ တော်တော်များများ မြန်မာများ အကြားမှာ မြန်မာအချင်းချင်း မြန်မာစကား ပြောကြတဲ့ အခါ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကို ညှပ်ထိုးသုံးလာကြပါတယ်။ အဲဒီလို ညှပ်သုံးလာတဲ့ အခါ အသံထွက်ကလဲ မမှန်တော့ ရုတ်တရက် ဘာကို ဆိုလိုက်သလဲ မသိဖြစ်ရပါတယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးလား၊ မြန်မာ စကားလုံးလား၊ အခြားဘာသာ တစ်ခုခုရဲ့ စကားလုံးလားတောင် မသဲကွဲပါဖူး။ ပိုဆိုးတာက မြန်မာစကားနဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါကို မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်မသုံးတတ်တဲ့ အခါ အဓိပ္ပါယ် ကောက်ရ ခက်တတ်ပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့်မို့ မိမိလဲ ဒီနေ့အခါမှာများ မြန်မာပြည်ကို တစ်ခေါက်တစ်ခါ ပြန်ရောက်ခဲ့မယ် ဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာစကားကို မြန်မာအချင်းချင်း ပြောဖို့မှာ နားလည် တတ်နိုင်ပါတော့မလား စိုးရိမ်မိရပါတော့တယ်။
Author ပင်တိုင်စာရေးသူPosted on May 21, 2019 May 21, 2019 Categories အတွေးအမြင်Tags ဘာသာစကား
One thought on “မြန်မာစကား ပြောတတ်သေးရဲ့လား?”
Pingback: စာတတ်သူနဲ့ ပညာတတ်သူ – The Blog of Aung
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားတစုံတဦးမှ ပြန်ကြားမှုရှိပါက အထက်မှာ ထည့်သွင်းထားသော အီးမေးလ်ကို အကြောင်းကြားပါ၊ သင် မှတ်ချက်ရေးထည့်ခြင်း မပြုဘဲ အခြားတစုံတဦးမှ မှတ်ချက်အသစ်ရေးသွင်းသည့် အခါ အကြောင်းကြားစေလိုလျှင် ဤနေရာကို နှိပ်ပြီး သင့်အီးမေးလ် လိပ်စာ ထည့်သွင်းပါ။
Previous Previous post: ထူးချွန်ဆုလား? ပရိသတ်ကြိုက်ဆုလား?
Next Next post: စာတတ်သူနဲ့ ပညာတတ်သူ
ယူနီကုဒ်အပြောင်း အထူးသတိပြုစရာ (4,655)
သူတို့ဆီက ကျောင်းသား သမဂ္ဂ (4,526)
စာတတ်သူနဲ့ ပညာတတ်သူ (2,397)
အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၁) (2,347)
အဘတို့ရွာက ရောက်လာကြသူများ အကြောင်း (၂) (1,480)